Azonao atao ve ny manoro ahy toerana sasantsasany mba hampitovy ny mombamomba ny tanjaky ny backlinks PR?
Mazava ho azy fa tsy tokony hohadinoina na oviana na oviana ny rohy avy amin'ny fahefana ambony sy loharanom-pejy matanjaka PageRank toy ny gazety nasionaly na ireo masoivohom-baovao iraisam-pirenena. Izany dia fomba tsara hanehoana ny mombamomba ny tranokalan'ny tranokala na blôginao ao amin'ny blôginao, saingy ny tanjona dia fantatra amin'ny hoe tena miasa mafy sy miasa mafy. Na izany aza, miaraka amina zavaboary kely ao an-tsainao, azonao atao tsara ny manangona backlinks sasany fanampiny mba hanatsarana ny mombamomba anao ao amin'ny profil an'ny backlinks. Ny tena zava-dehibe - mety efa azonao ny sombiny amin'ny votoatin'ny kalitao na ny fifandraisana efa nomanina ho an'izany - multipower protein tozu fiyatlari. Eto ambany eto dia hampiseho anao toerana roa sy saha tsara tokony hodinihina hifandraisana. Raha ny marina, izany dia mety ho fotoana lehibe ahafahana mifandray amin'ireo angamba tranonkala fampianarana / azo itokisana indrindra. Na izany na tsy izany, ny andaniny sy ny ankilany dia tsy mila ny fandanian'ny teti-bola be loatra na ny fotoana be loatra. Mazava ho azy fa raha marina izany.
Sehatry ny governemanta
Anisan'ireo firenena, tranonkala ao an-toerana na bilaogy manohana miaraka amin'ny tombo-kase dova GOV dia ireo loharano vitsy an'isa amin'ny farany ny ambony DA (tompon'andraikitry ny sehatry ny sehatra) dia mitifitra mitifitra 100 ny isa feno. Raha heverina fa tsy mahomby ny fanatsarana ny mombamomba ny backlinks amin'ny alàlan'ny olona avy amin'ny sehatra governemanta, dia mbola misy ihany ireo fahafahana mbola eo an-toerana. Midika izany fa tranonkala maro ao amin'ny governemanta no mampiasa ny torolàlana momba ny orinasa mba hampiroborobo ny fampiroboroboana amin'ny aterineto ho an'ny orinasa any amin'ny faritra misy azy. Ny fitantanana governemanta eo an-toerana dia angamba ny fomba mora indrindra sy haingana indrindra amin'ny fanangonana antontan-drakitra matanjaka mahery kokoa manondro ny tranokalanao na ny blôgy.
Fanabeazana (University / College) Pages
Ny ampahany amin'ny liona manana traikefa azo itokisana dia fantatra fa manana ny tranonkalany DA avy amin'ny 90-95 ( momba ny fianarana vao haingana). Fa ny tena zava-tsarotra indrindra dia ny mahita ny tena dikan'ny fitoriana. Voalohany indrindra, miezaha hahatonga azy ireo ho fankasitrahana - hitady ny olona mety fantatrao ho mpianatra taloha na mpikambana ao amin'ny staff. Raha heverinao fa ny oniversite sy ny oniversite dia miezaka hatrany mampiseho azy, ampiasao izany ho tombontsoanao - manolotra azy ireo ny tantaram-pahombiazany, ny làlam-panatanterahana, na ny tafatafa mafana izay tadiaviny, miaraka amin'ny fanatsarana ny pejinao avo momba ny backlinks amin'ny mpivady vao namorona rohy ho setrin'izany. Ny tena zava-dehibe dia ny fanananao ireo rakitra goavam-be amin'ny alàlan'ny oniversite na ny pejy fianarana amin'ny ambaratonga ambony, ianao dia mampiasa fomba hafa hiresahana ny anaranao amin'ny orinasa orinasa na mahazo fisondrotana bebe kokoa ao amin'ny indostrian'ny orinasa sy ny tsena misy anao.
Raha tsy misy na inona na inona manampy, dia fomba iray hafa fomba handaminana ny adihevitra marina amin'ny oniversiten'Antananarivo na any amin'ny oniversite hafa - izany dia tena miasa ho anao amin'ny karama roa. Ny ilainao dia ny manana vokatra na serivisy mahakasika ny mpianatra na eo an-toerana. Manandrama fotsiny manolotra, ohatra, code code manokana. Amin'izany fotoana izany, dia mety ho fomba iray ahafahana mizara bebe kokoa, fitarihana, famandrihana ary fanamarihana ao amin'ny media sosialy - ankoatra ny tanjon'ny fametrahana rohy. Mariho anefa, fa ny hahombiazan'ity rafitra ity dia ny orinasanao na ny tetikasam-pandraharahana no ilaina mba hanolotra zavatra azo vidiana na entina an-tserasera.